कांग्रेसकाे जागरण अभियानमा 'गब्बर'काे खाँचाे - हिमाल दैनिक
कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले गाउँ गाउँमा जागरण गर्दा कमसेकम यो थोरै समयका लागि नै भएपनि कांग्रेसको दुःखमा मात्रै सुखी हुने र कांग्रेसको सुखमा दुःखी हुने अन्तरघातको प्रवृत्ति छोडौँ
२८ बैशाख २०७६, शनिबार १९:४२
राजनीतिक नेताहरुले बोलिमा अरुले त कुरै छोडिदिउँ कार्यकर्ताले पनि पत्याउन छोडिसकेका छन्।
म नेता होइन, किन कि त्यस हदमा मेरा गतिविधिहरु छैनन्। कवि तथा साहित्यकार विष्णु विभु घिमिरेले भनेजस्तै म त लेखेकै भएको भए जाती हुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले ठिक भन्नु भयो। मलाई पनि त्यस्तै लाग्दछ, कुनै बेला यो बाटोमा लागिसकेपछि त्यसको भरण पोषण त गर्नै पर्यो।
तर, म साँच्चै हृदयदेखि नै भन्दैछु, आज एउटा राम्रो कार्यक्रम विश्वप्रकाश शर्माजीले गर्नु भएको छ। यहाँ नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको राष्ट्रिय जागरणको बारेमा प्रश्न उठे। जागरणमा के गर्ने? कसरी गर्ने? यो सिंगो नेपाली कांग्रेस र देशले बुझोस्, तपाईहरुलाई एउटा कुरा मैले भन्दा ठट्टाजस्तो लाग्न सक्दछ।
कि विजयकुमार पाण्डे भर्खर भर्खर पत्रकारितामा लाग्नु भएको थियो। उहाँले साप्ताहिक विमर्श भन्ने पत्रिकाबाट पत्रकारिता सुरु गर्नु भएको थियो। त्यस्तै ४०÷४१ सालतिर हुनु पर्दछ, उहाँको संगत किशोर नेपालसँग भएछ।
किशोर नेपाल एकप्रकारले मेरो सार्वजनिक जीवनको पहिलो शिष्य भनेपनि हुन्छ। म २०÷२१ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक जेल जाँदा उहाँ १४ वर्षको उमेरमा मसँगै जेल जानु भएको थियो। किशोरजीमार्फत पाँण्डे मेरो सम्पर्कमा आए। उनी बेला बेलामा समाजवाद के हो?, कांग्रेस के हो?, उदारवाद के हो? भन्ने पश्न गर्नुहुन्थ्यो।
पाँच सातदिन लगातार आएपछि एक दिन उनले अचम्मको प्रश्न गरे। कांग्रेस भनेको को हो? कांग्रेस भनेको के हो? पञ्चायतकालको बेलामा कोही कांग्रेस कार्यकर्ता थिए त कोही कम्युनिष्ट कार्यर्ता थिए तर, उनीहरुसँग अरु मानिसहरु यसै तर्किएर हिँड्दथे।
त्यतिबेला प्रतिप्रश्न गर्दै पाँण्डेलाई सोधेँ, तपाइको विचारमा कांग्रेस के हो? जवाफमा उहाँले भन्नु भयो, ‘कुनै पनि पार्टीमा नदेखिने, कुनै बैठकमा नजाने, कुनै सार्वजनिक ठाउँमा नभेटिने र लुकेरै कोठामा बसीरहने नै कांग्रेस हो।’
त्यतिबेलाको परिस्थितिमा कुनै पनि पार्टी, कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा थुप्रो मानिसहरु, जो पञ्च, महापञ्चहरु भेटिन्थे तर, कांग्रेस कहिँ नभेटिने भएको कारण कांग्रेस भनेको यहि हो भन्नु भयो।
प्रतिबन्धित कालमा विजयकुमार पाण्डेको परिभाषा बडो सटिक र मार्मिक थियो। पाण्डेको त्यो कमनसेन्स अहिले २५ वर्षको हामीहरुको राजमा, यो भोग युगमा (भोग युग र तपोः युग भनिन्छ) मैले कांग्रेसको अर्को परिभाषा के देखिरहेको छु, त्यो हो जसले कांग्रेसभन्दा अरुलाई भेट्दैन, कांग्रेससँगमात्रै मिलेर बस्छ र कांग्रेससँगमात्रै झगडा गर्छ त्यहि हो अहिलेको कांग्रेसको नयाँ परिभाषा।
झगडा गर्दा पनि कांगेससँगै गर्ने, रक्सी खाँदा पनि कांग्रेससँगै मिलेर खाने, मिटिङ गर्दा पनि कांग्रेस मात्रै मिटिङ गर्ने गर्दछ। चुनावी सभामा गएको छ, त्यहाँ बोलाएका मानिसमध्ये अकांग्रेस एउटा पनि हुँदैन। समाजसँग टाढिएर इन्सुलेटेड अर्थात विजुलीको तार जस्तै भएर बस्ने प्रवृत्ति यो २५÷३० वर्षमा चलायौँ। आज पनि त्यहि छ।
समाजमा कांग्रेस कांग्रेस मात्रै छैन, डाक्टर, इन्जिनियर, कवि, कलाकार पनि छन्। र तिनीहरुका बिचमा पनि कांग्रेसले अथवा प्रजातन्त्रवादीले आफ्ना कुरा भन्नु पर्दछ। भन्ने क्रममा उनीहरुले सुनाएको कुरा, अनुभूति गर्ने, उनीहरुको व्यवसायिक र पेशागत कुरामात्र होइन त्यसबाट उत्पन्न मानविय अनुभवहरु पनि सेनेर त्यस अनुभूतिको आलोकमा फेरि कांग्रेसको तथाकथित सिद्धान्तलाई पनि परिमार्जित गर्नु पर्दछ।
सिद्धान्तको अर्को समस्या के छ भने, कि अस्ती राष्ट्रपतिले गरेको संसदको सम्बोधनको निकै चर्चा भयो, त्यतिबेला मैले टिप्पणी गर्दै भनेको थिएँः आफ्नो चाहनालाई नै देशको चाहना नसम्झिनुहोस् प्रधानमन्त्री महोदय।
राजनीतिक विज्ञानको विषय के हो भने, राजनीतिज्ञले आफ्नो चाहनालाई सिंगो समाज र देशको चाहना भन्ने ठानिन्छ।
त्यसको एउटा उदाहरण छ, चुनावभन्दा ठिक अगाडि जहितहिँ मैले बाहेक अरुले जित्दै जित्दैन भन्ने। जंगेले बोलिसकेपछि पूरा गर्नै पर्यो। त्यसका लागि आफूले नपाएर अर्कोले पाएपछि उसलाई हराउँनै पर्यो। यो आत्मगत चाहनाबाट मुक्त हुनका लागि हामीले समाजमा रहेका सबै वर्ग, पेशा, समुदायको भावनाहरुलाई बुझ्ने गरीकन र त्यसलाई आफ्नो अनुभवमा ढाल्नेगरीकन अगाडि जानु पर्दछ।
यसमा मलाई भन्न कुनै संकोच छैन, डाक्टर, कवि, कलाकार, अझ सिनेमाको समाजमा अझ महत्व छ। सिनेमाले, गीतले समाजलाई अझ बढि प्रभाव पार्दछ। डाक्टर, ठेकेदार (ठेकदार अलि बदनामै वर्ग छ) महत्व कम छ भन्ने होइन। यी सबैको महत्व उत्तिकै हुने भएको कारण नै पुरानो, थोत्रो बुर्जवा सिद्धान्त, प्रजातन्त्र भनि गालि गर्छन नि, त्यसले प्रधानमन्त्रीदेखि साधारण व्यक्तिसम्म एक व्यक्ति एक भोटको मान्यता दिएको छ। सबै बराबर हुन।
विष्ण विभु घिमिरेलाई सम्मान गर्ने क्रममा सुटुक्क भनेकै हो, तपाइलाई झापामा मात्रै सिमित गर्न आँटेकी क्या हो भनेर। यसमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा आत्मियता भएको कारण सुटुक्क उहाँसँग सोधेको हो तर, झापामा मात्रै कुनै पनि कवि सिमित हुँदैन र कसैले सिमित गर्छु भनेर पनि हुँदैन।
आफ्नो जमानामा नेता र अभिनेताको एउटा चर्चा हुन्छ। तर, समय वित्दै जाँदा कलाकार र साहित्यकारको चर्चा हुन्छ। शेक्सपियरको समयमा बेलायतमा राजा को थिए? कालिदासको समयमा हिन्दुस्थानमा शासक को थिए? यिनीहरु त महान कविहरु भए तर कालिदासभन्दा पनि साना कवि हिन्दुस्थानमा र शेक्सपियरभन्दा पनि साना कवि बेलायतमा छन् नि त। त्यी साना कवि जहाँ थिए त्यहिँ छन्। त्यतिबेलाका राजा, राजवंश विस्मृतीमा गएका छन्। यसैले कविको विशेष महत्व छ।
तर, राजनीतिको के हुन्छ भने तात्कालिक चमक धेरै हुन्छ। टिभीले पनि उसैले घेर्छ, अखबारले पनि उसैलाई बढि स्थान दिन्छ। एउटा हुन्छ नेताको, अर्को हुन्छ अभिनेता उनीहरुको बडो चमक हुन्छ आफ्नो समयमा। एउटा हुन्छ नेतृको अर्को अभिनेतृको। उमेर वित्दै जाँदा अभिनेतृको हाल के हुन्छ? अभिनेता पनि कसरी पाखा पर्छ त्यो तपाइहरुले देखेकै छौँ।
त्यसैले विश्वप्रकाशजीलाई साँच्चै हृदयदेखि बधाई दिन चाहन्छु। कि उहाँले आज विभिन्न पेश, व्यवसायमा संलग्न मानिसहरुलाई भेला गर्नु भयो। सँगसँगै उहाँले परोक्ष रुपमा उत्तर दिनु भएको छ, जागरण भनेको के?
यहाँ जागरणका विषयमा कुरा आएको छ। यसबारे अघि सभा सञ्चालकले दुइवटा मार्मिक कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा कुरा, पार्टीभित्र अनुशासन कहिले हुन्छ? पार्टीभित्रको लडाई झगडाको अन्त्य कहिले हुन्छ? तर, यो हाम्रो कांग्रेसको एउटा मौलिक शब्द उहाँले भन्न चाहनु भएन वा विर्सनु भएछ। नेपाली शब्दकोषमा कांग्रेसले थपेको विशेष शब्द छ त्यो होः अन्तरघात। यो शब्दलाई कांग्रेले आफ्नो कपि राइट्स गराए हुन्छ।
चुनाव लड्छ, त्यसको भोलिपल्ट उसलाई थाहा हुँदैन कि अब के गर्ने भनेर। तर, विश्वप्रकाशले के गर्ने भनि देखाएको कुराप्रति फेरि धन्यवाद दिन्छु।
चुनाव हारेपछि दुई चुनावका बिचमा हारे पनि जिते पनि गर्ने थुप्रै काम छन्। जसलाई गान्धीले रचनात्मक कार्य भन्नु भयो। बी.पी. भन्दा ठूलो क्रान्तिकारी नेपालमा कोहि थिएन तर, उहाँले पनि नेपालमा गान्धीको जस्तै आश्रमको शिलान्यास सप्तरीमा गरेर रचनात्मक कार्यका लागि सन्देश दिनु भएको कुरा उहाँको डायरीमा लेखिएको छ। जुन कुराको विषयमा हिमाल दैनिक डटकममा मैले केहि समयअघि छपाएको थिएँ। ‘बीपी आश्रम’ कांग्रेस पुनर्यौवनको स्रोत किन हुँदैन? त्यहाँ विस्तृतमा लेखेको थिएँ, कि पार्टीको कार्यक्रम के हुने भनेर।
मलाई लाग्दछ, आँखा चिम्लिएर कांग्रेसले कांग्रेसका आगडि बढ्न चाहने नेताहरुले बी.पी.ले लेखे जस्तै हामीले आजको परिस्थितिमा देश, काल, परिस्थितिमा खाली नबस्न केहि रचनात्मक कार्यको थालनी गर्नै पर्छ। यसमा केहि गतिला साथीहरुले बाटो निकालेका पनि छन्।
अरु केहि नभए गीत गाएर बस, नाँचेरै बस। गीत गाउँन र नाँच्न थालेपछि पार्टीकै साथीको खुट्टा तान्न त ध्यान जाँदैन नि। अथवा पढेर बस तर, यो पढ्ने कुरा अहिलेको कांग्रेसजनका लागि अलि गाह्रो हुन्छ।
यस्ता रचनात्मक कामका स्वरुपको कमि छैन। बी.पी.ले सायद त्यहि उद्देश्यले आश्रमको स्थापना गर्नु भएको थियो। गान्धीले चर्खा भन्नु भएको थियो। उहाँले चर्खा भनेको त्यहि चर्खा अहिले पनि चलाउने भनेको होइन। चर्खा भनेको राजनीतिक कार्यकर्ताले खाली समयमा पनि खाली नबस्नु, खाली दिमाग सैतानका घर भन्ने लागेर हो।
अहिले जागरण सभामा आउनु पर्ने समाजका सबै क्षेत्रका साथीहरुमा आउनु भएको छ। कवि, कलाकार, डाक्टर, इन्जिनियर, ठेकेदार र विभिन्न पेशाका मानिसहरुको महत्व कति रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ।
मानिसको जन्म जहाँसुकै भएपनि जीवनमा प्रेमको पहिलो अभिव्यक्ति, भलै आजभोलि प्रेमको नशामा परेका युवा, युवती कहाँ जान्छन् जान्छन्। तर, महान क्रिकेट खेलाडी होस् त्यो खेलाडीले पहिलो पटक क्रिकेट खेल्दा जब उसले चौका हान्दछ, त्यसपछि उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नी आमा या प्रेमिकालाई सम्झिन्छ। पहिलो पटक कुनै युवाले कविता छापिन्छ उसले या त त्यो आफ्नै प्रेमीकालाई लिएर लेखियो होला वा उसले के भन्छिन् भनेर लेखियो होला। यसैले हामी जन्मभूमि र गाउँको विम्वमा नअल्झिए हुन्छ। कुनै पनि श्रृजना, खेल अझ एकहदसम्म राजनीति भन्ने फोहोरी खेलमा पनि सर्वप्रथम हामी कसको प्रतिक्रिया हेर्न चाहन्छौँ भने, त्यो हो आँफूले माया गरेको र आफूलाई माया गरेको व्यक्तिको।
यो मेरो मौलिक कुरा होइन। अंग्रेजी कवि डाइलन थोमसले आफ्नो कविता ‘इन माइ क्राफ्ट अर सलन आर्ट’मा भनेका छन्, मेरो समस्थ परिश्रम र पुरस्कार तिम्रो ओठमा देखिने सगर मुस्कान। म धेरै प्रेममा परेका बेला उनको कविता धेरै पढेँ। उनले आफ्नो कृति कुनै पुरस्कारका लागि नभई आफ्नी प्रेमिकाको मुहारमा गर्भको मुस्कान आउँछ भनेर लेखेको हो। यहि भावना अनुसार तपाई हामीले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु छ।
विष्णु विभु घिमिरेको एउटा कविता मलाई सम्झना छ। अक्षरस नहोला, मोटामोटीमा उहाँ भन्नु हुन्छः आँखा भएर के भयो त, अरुको दुःखमा आँखा रसाएन भने। मुटु भएर के भयो त, अरुको दुःखमा धड्किएन भने।
यो जागरणको सन्देश यहि हो। कि कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले गाउँ गाउँमा जागरण गर्दा कमसेकम यो थोरै समयका लागि नै भएपनि कांग्रेसको दुःखमा मात्रै सुखी हुने र कांग्रेसको सुखमा दुःखी हुने अन्तरघातको प्रवृत्ति छोड्नु पर्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कवितामा जस्तैः मलम लगाउ आर्तहरुको चराईरहेको घाउँ। यहि सम्वेदनकासाथ गाउँमा काम गर्नु छ।
म यो जागरणका नेता, कार्यकर्ता सबैैलाई भन्छु, जागरण भनेको कांग्रेस÷कांग्रेसबीच झगडा गर्ने वा सत्तामा जाने कुरा मात्र होइन। जागरण भनेको साच्चै नै जनताका दुःख र पिरमर्कामा एकाकार भएर कांग्रेसको मुटु, मन सम्वेदनशील हुन जरुरी छ।
तर, मलाई यसमा कुनै शंका छैन, माक्र्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, वा युरोपियन समाजवादका विद्धान जस्तै कांग्रेसमा पनि सौभाग्यवस बी.पी., किसुनजी, गणेशमानजी सबैसँग मिलेर काम गर्ने मौका मिल्यो। उहाँहरुसँग झगडा गर्ने पनि मौका मिल्यो। आज म यो उमेरमा पुगेर प्रष्टसँग भन्न सक्छु, जुन कार्यकर्ताको हृदयमा छरछिमेकप्रति प्रेम छैन, अरुका प्रति संवेदना छैन, त्यो जे सुकै होस् समाजवादी हुन सक्दैन।
समाजवादको पहिलो परिभाषाः कार्लमाक्र्स, माओको हेर्ने कामै छैन। यसको परिभाषा खोज्न यदि तपाइलाई कुनै बेला भनिन्छ, कि बुद्धदेवले एउटा विरामी देखेर उनको मन पग्लियो, बुढो देखेर मन पग्लियो, भिख माग्ने देखेर पग्लियो। त्यो नै प्रजातान्त्रिक समाजवादको उच्च रुप र प्रेरणाको मुहान हो।
यसैले जागरणको सवालमा, यो सन्देशको आवश्यक छ, प्रष्ट नभएपनि प्रतिकात्मक रुपले यो सभाले गरेको छ।
पार्टीभित्रको अनुशासन आदिको कुरामा, हामी सबैसँग अनुशासनको माग गर्दछौँ। अरुसँग अनुशासन खोज्नेले आफू अनुशासित भएर माग्ने योग्यता देखाउन सक्नु पर्दछ।
प्रजातन्त्रको प्रत्येक सिद्धान्तमा हामी सँधै अधिकारको कुरा गर्दछौँ। गान्धीजीले बारम्बार भन्नु हुथ्यो, कर्तव्यवीनाको अधिकार काम लाग्दैन।
आजको कांग्रेसको समस्या के हो भने, अधिकारप्रति हामी बडो सचेत छौँ। जसलाई सोध्न जानुहोस्, उसले भन्छः मेरो के हुन्छ। मलाई के हुने हो? अन्यथा नलिनु होला कांग्रेसी नेताहरुले, अब कोहि रामचन्द्रजीसँग गएर तपाई अब ७० वर्ष भइसक्नु भयो, शास्त्र पढ्ने मान्छे अब तपाई वानप्रस्त गरे हुन्न भन्नु भयो भने उहाँले भन्नु हुन्छः होइन, मेरो के हुन्छ? त्यसपछि मैले के गर्ने? यहि प्रश्न शेरबहादुरजीसँग गएर अब तपाई सभापति, पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, अब त छोडे हुन्छ नि भन्नु भयो भने, उहाँले पनि भन्नु हुन्छः अनि मैले के गर्ने? यो तैँले के गर्ने भनि सोध्नुको सट्टा मैले के गर्ने?
यसका लागि हिन्दी फिल्म ‘सोले’मा गब्बरसिंहको डायलग छ निः तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? भन्नुको साटो ‘मेरा क्या होगा रे कालिया? भन्ने अवस्था छ। यसैले यो मेरा क्या होगा रे कालिया भन्ने नेतृत्व पंक्तिबाट यो भावना हटाएर तुम्हारा क्या होगा रे कालिया भन्ने संस्कृतिको विकास गर्नु छ। कांग्रेसको जागरण यहि हो।
(झापा क्षेत्र नम्बर १: काठमाडौं सम्पर्क समितिले राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गत सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शनिबार गरेको भाषणको सम्पादित अंश)
Prevपछिल्लोहनुमानले विन्ध्याचल पर्वत ल्याएजस्तै अर्थमन्त्रीले बजेट सम्बन्धी विधेयक ल्याएः भट्टराई
अघिल्लोप्रतिनिधि सभामा प्रि-बजेट छलफल सुरु (प्रत्यक्ष प्रशारण)Next